China XY-4311G Vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy orinasa | Shuolong
XY-4311G lamba vita amin'ny vy tsy voadio
XY-4311G- vy metaly ampiasaina ho facade, tsy vitan'ny hoe mandray anjara amin'ny haingon-trano fotsiny, fa afaka mampiasa faritra misokatra amin'ny harato metaly maritrano mba hanakanana ny ampahany amin'ny masoandro.
Fitaovana: Stainless Steel & Copper
Weight: 8.54kgs / m2
Haavo matevina: 10mm
Fitsaboana ambonin'ny tany: PVD
Max Sakany: 1.5m
Max Halavany: 3m
Max Halavany: 4m
Mihamaro hatrany ny endrika misafidy ny harato vy ho singa manan-danja amin'ny famolavolana maritrano, satria ny metaly harato dia afaka manalalaka ny habaka famolavolana azy ireo. Ny fomban'ny metaly metaly dia tsy tokana, ary azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa famolavolana tsirairay. Ny tena zava-dehibe dia ny hahatonga ny lohahevitra famolavolana ho tsara tarehy sy azo ampiharina. Afaka manao izany ny harato vy fananganana.
Ny mangarahara amin'ny harato ara-javakanto dia manome rivotra madio voajanahary. Izahay dia afaka manamboatra ny faritra misokatra amin'ny harato nofidinao mba hahatratrarana ireo fepetra takiana amin'ny rivotra momba ny rivotra. Ny Architectural Mesh dia manome fiarovana amin'ny masoandro mahomby; manivana ny tara-masoandro ary mampihena be ny hafanana ao anaty trano.
Inona koa, raha mila mampiditra singa famolavolana vy amin'ny tetik'asa misy anao na ho avy ianao dia mifandraisa anay azafady. Ho fanampin'ny vokatra avo lenta sy ny vidiny tsara indrindra, afaka manome ihany koa izahayserivisy namboarina sy vahaolana fametrahana ho an'ny Programanao.
Afaka manome anao kojakoja mety mifanaraka amin'ny filanao tetik'asa izahay. Na lalamby mahitsy na lalamby miolikolika misy miolakolaka, ShuoLong dia afaka manampy anao hahatsapa izany. Ny hatevin'ny kojakoja omenay anao dia farafahakeliny 2mm, ary lava kokoa ny androm-piainana. Raha mbola manana fanontaniana momba ny fizotran'ny fametrahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, hanome anao horonan-tsary fametahana amin'ny antsipiriany kokoa izahay hamaliana ireo fisalasalanao.
1.Ny fonosana dia tena mampidi-doza ho an'ny harato ara-maritrano, ny fonosana tsara dia afaka miaro ny vokatra mahomby mba hahazoana tsara ny harato amin'ny mpanjifa.
Araka ny karazany, habe ary toetra mampiavaka ny harato, manao fonosana tsara ho an'ny baiko tsirairay i SHUOLONG. Ivon-toerana momba ny serivisy momba ny fepetra takiana.
2.Mba ny fomba fitaterana dia afaka manome anao tolotra express iraisam-pirenena izahay, toa ny TNT, FedEx, UPS, DHL, sns, ary afaka manome anao serivisy fitaterana an-dranomasina koa izahay.
3. haben'ny fonosana:
1) Ny pcs tsirairay dia manangona taratasy, 1-5 pcs ao anaty boaty hazo;
2) Namboarina ho an'ny zavatra takinao.
Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd.. dia mpanamboatra sinoa avo lenta an'ny harato vy vita amin'ny vy ho an'ny indostrian'ny maritrano sy indostrialy. Izy io dia azo ampiasaina ho Facades ivelany, Balustrades, Staircase cladding & Screens, Sun screens & Ceiling, Interiors, Metal ridges, Room dividers, sns.
Azontsika atao ny manamboatra harato manara-penitra avo lenta sy miavaka izay mifanaraka tanteraka amin'ny filàn'ny tetikasanao. Miaraka amin'ny fampahalalana kely momba ny karazana metaly, savaivon'ny tariby, pitch ary crimping, afaka mifampiresaka mora aminay amin'izay tena ilainao ianao mba hampandeha tsara ny fametrahana ny harato miaraka amin'ny sisa amin'ny volavolanao. Na mitady endrika tsotra na mahazatra ianao, na lehibe na kely, dia ankafizinay ny fotoana mety ho anisan'ny tetikasanao manaraka!
Amin'ny maha mpanamboatra tariby tariby manana tantara efa ho antsasaky ny taonjato dia manana fahaizana ampy hifehy ny kalitao isaky ny lamina i SHUOLONG. Ary miaraka amin'izay dia afaka manana ny vidiny mivantana ho an'ny vokatra harato tariby isika. Manao wire wire fotsiny izahay, matihanina izahay!
1.40 taona niainana: Maherin'ny 40 taona ny traikefa famokarana harato.
2.Qual Garantee: Ny baiko tsirairay dia voasedra sy fehezina tsara araky ny fenitra ambonimbony kokoa noho ny sehatra iraisam-pirenena.
3. Serivisy namboarina: Ho fanampin'ireo fomba fanaonay efa misy, azonay atao ihany koa ny manamboatra ho an'ny filanao famolavolana
4.Ny vidiny tsara indrindra: Hifanaraka amin'ny santionany na fanehoana nomen'ny orinasa hafa anay izahay. Mba hanararaotana ny fampanantenanay ny vidin'ny lalao dia alefaso aminay fotsiny ny teny nalaina avy amina orinasa hafa ary hofaranay 10% farafaharatsiny ny vidin'izy ireo
Raha te hametraka ny baiko ianao na mila mahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ny harato vy anay, dia andefaso ny hafatrao amin'ny tranokalanay, antsoy izahay na andefaso mailaka izahay. We hamaly anao ao anatin'ny 24 ora!
Previous: XY-4356 Stainless Steel Wire Mesh ho an'ny tranom-panjakana
Manaraka: XY-4311 Metal Mesh efijery ho an'ny Building Facade
Panel amin'ny valindrihana metaly
Sarimihetsika Metal Mesh
Sakan'ny vy tsy misy vy
XY-A1283 Lamba metaly ho an'ny Office Building Cladding
XY-4356 Stainless Steel Wire harato ho an'ny daholobe Bu ...